IGAD oo shir ka yeelanayo Dacwad DF ka gudbisay Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
IGAD oo shir ka yeelanayo Dacwad DF ka gudbisay Kenya
Wasaaradda Arrimha Dibadda Soomaaliya ayaa shaacisay inay Cabdalla Hamdok, oo ah gudoomiyaha IGAD sanadkan ay u gudbisay dhambaal dacwad ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa lagu wadaa in Madaxda Urur Goboleedka IGAD ay 20-ka bishan isaga yimaadaan Kulan gaar ah Dacwad cusub oo ka dhan ah dowladda Kenya oo xilligan kala dhaxeeya Xiisad diblomaasiysadeed.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay in DF u gudbisay Ra'iisul Wasaaraha Sudan, oo haatan ah gudoomiyaha IGAD warqad ay ku qoran tahay dacwadda ay ka gubiyeen Kenya.
"Iyadoo laga jawaabayo dhambaalka ka dhanka Kenya ee ay Dowladda Federaalka Soomaaliya u gudbisay Mudane Cabdalla Xamduuk, Ra'iisul wasaaraha Sudan ahna Shir-guddoonka Madaxda Dowladaha iyo Xukuumadaha IGAD, ayaa Urur goboleedka IGAD waxa uu shir madaxeed ay ka qeybgalayaan Madaxda Dowladaha iyo Xukuumadaha oo arrinkan looga hadli doono ku qabanayaa Dalka Jabuuti 20 bishan December," ayaa lagu yiri qoraalka.
Ma aysan fahfaahin Wasaaradda waxa ay ku saabsan tahay Dacwadda, laakiin waxaa loo maleynayaa inay la xiririta casuumaadda Kenya u fidisay hogaamiyaha Somaliland Muuser Biixi oo shalay booqasho ku tagey Nairobi.
Xiriirka labada dal ayaa xumaaday dhawaan kadib markii DF ay Muqdisho ka ceyrisay Safiirkii Kenya Lucas Tumbo, iyadoo Maamulka Farmaajo ku eedeeyay Xukuumadda Nairobi inay faragelin ku hayso doorashadda.
Kenya ayaa beenisay eedeymaha dowladda, iyadoo ku tilmaantay inay yihiin kuwa la siyaasadeeyay, oo Farmaajo ku doonayo inuu kusoo galo ololaha doorashadda 2021.
0 Comments Topics: kenya somaliland soomaaliya